ကိုယ်သောက်နေကျ ဆေးတွေရဲ့ နာမည်အဆုံးမှာ MR, SR, OD, CR, RETARD, XL စသဖြင့် ရှိတာကို သတိထားမိပါသလား – Alinyaung
March 8, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM Health 0
ကိုယ်သောက်နေကျ ဆေးတွေရဲ့ နာမည်ကို ဂရုစိုက် ဖတ်ဖူးပါသလား? တချို့ဆေးတွေရဲ့ နာမည်အဆုံးမှာ MR, SR, OD, CR, Retard, XL စသဖြင့် ရှိတာကို သတိထားမိပါသလား?
လူအများစု ဆေးတွေကို ခြမ်းပြီး ချိုးပြီး သောက်တာမျိုး ရှိဖူးမှာပါ။ နောက်ပြီးတော့ ဆေးဆိုင်မှာ ဝယ်တဲ့အခါမှာလဲ ကိုယ်သောက်နေကျ ပမာဏ mg ပစ္စည်း ကုန်နေတာမျိုးကြုံရင် ဥပမာ ကိုယ်က ၁၀၀မီလီဂရမ် သောက်နေကျ ပေမယ့် ဆေးက မရှိတဲ့အတွက် ၅၀ မီလီဂရမ် ၂ လုံး သောက်လိုက်တာမျိုး ၂၀၀ မီလီဂရမ်ကို တဝက်ခြမ်း သောက်လိုက်တာမျိုး ဆေးဆိုင်တွေကလဲ ၁၀၀ မီလီဂရမ် ပစ္စည်းပြတ်လို့ ၅၀ မီလီဂရမ် ၂ လုံး သောက်လိုက်ပါ ဆိုတာမျိုး လုပ်ဖူးကြမှာပါ။
အဲ့ဒီအခါမှာ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ မှန်ကောင်းမှန်နိုင်ပေမယ့် အပေါ်မှာ ဆိုခဲ့တဲ့ MR, SR, OD, CR, Retard, XL စသည်တို့နဲ့ အဆုံးသတ်ထားတဲ့ ဆေးနာမည်တွေမှာ ပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအတိုကောက် MR, SR တွေကိုဆေးနာမည်မှာ ဘာလို့ ထည့်ထားရတာလဲဆိုတော့ တစ်ချို့ ဆေးတွေမှာ သောက်သောက်ပြီးချင်း အာနိသင်ပြပြီး ချက်ချင်း အာနိသင် ကုန်မသွားအောင် ဆေးရဲ့ အာနိသင် တစ်နေကုန်ရနေအောင် ဖေါ်စပ် ဖန်တီးထားပါတယ်။ သွေးကျဆေး ဆီးချိုဆေး စတာတွေမှာပေါ့။￼
MR SR စတာတွေရဲ့ အရှည်ကောက်ကတော့ Modified release, Slow release, substained release ပါတဲ့ ။ ဆိုလိုတာကတော့ ဆေးကို ချက်ချင်း အာနိသင် အကုန်မပြပဲ တနေကုန် ဖြည်းဖြည်းချင်း ထွက်နေအောင် လုပ်ထားတာပါ။ တစ်နေကုန် အာနိသင် ပြနေအောင် ဒါမှမဟုတ် တရက် ၂ ကြိမ် ၃ ကြိမ် သောက်နေစရာမလိုပဲ တစ်ကြိမ်ထဲနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ဆေးကို စတင် ထုတ်လုပ်ကတည်းက တစ်ချို့ဆေးတွေကို ဓာတုဗေဒပစ္စည်း ပေါင်းထည့်ထားတာမျိုး coat လုပ်ထားပြီး အလွှာအုပ်ထားတာမျိုး ဖန်တီးထားလေ့ ရှိပါတယ်တဲ့။
ဆေးကိုချိုးပြီး သောက်လိုက်တာမျိုး ၁၀၀ အား မရှိလို့ ၅၀ အား ၂ လုံး သောက်လိုက်တာမျိုးမှာ ဖြေးဖြေး စိမ့်ထွက်လာရမယ့် အာနိသင်တွေဟာ အချိုးအစား မှန်မှန်ကန်ကန် မရပဲ ကမောက်ကမ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ မိမိသောက်နေကျ ဆေးတွေရဲ့ အနောက်မှာ MR, SR, OD, Retard, XL စသဖြင့်ပါ မပါ ကြည့်ပီး ပါနေခဲ့ရင် ခါတိုင်း သောက်နေကျ ပုံစံ အတိုင်းသာ သောက်ပြီး တစ်ဝက်ခြမ်းသောက်တာမျိုး ၂ လုံးသောက်တာမျိုး မလုပ်ပဲနဲ့ ကိုယ်သောက်တဲ့အား ပမာဏ အတိကျကိုသာ ရှာဝယ်သောက်သင့်ကြောင်း အကြံပြုလိုပါတယ်။
Source : Great Heart Myanmar
ကိုယျသောကျနကြေ ဆေးတှရေဲ့ နာမညျအဆုံးမှာ MR, SR, OD, CR, Retard, XL စသဖွငျ့ ရှိတာကို သတိထားမိပါသလား
ကိုယျသောကျနကြေ ဆေးတှရေဲ့ နာမညျကို ဂရုစိုကျ ဖတျဖူးပါသလား? တခြို့ဆေးတှရေဲ့ နာမညျအဆုံးမှာ MR, SR, OD, CR, Retard, XL စသဖွငျ့ ရှိတာကို သတိထားမိပါသလား?
လူအမြားစု ဆေးတှကေို ခွမျးပွီး ခြိုးပွီး သောကျတာမြိုး ရှိဖူးမှာပါ။ နောကျပွီးတော့ ဆေးဆိုငျမှာ ဝယျတဲ့အခါမှာလဲ ကိုယျသောကျနကြေ ပမာဏ mg ပစ်စညျး ကုနျနတောမြိုးကွုံရငျ ဥပမာ ကိုယျက ၁ဝဝမီလီဂရမျ သောကျနကြေ ပမေယျ့ ဆေးက မရှိတဲ့အတှကျ ၅၀ မီလီဂရမျ ၂ လုံး သောကျလိုကျတာမြိုး ၂၀၀ မီလီဂရမျကို တဝကျခွမျး သောကျလိုကျတာမြိုး ဆေးဆိုငျတှကေလဲ ၁၀၀ မီလီဂရမျ ပစ်စညျးပွတျလို့ ၅၀ မီလီဂရမျ ၂ လုံး သောကျလိုကျပါ ဆိုတာမြိုး လုပျဖူးကွမှာပါ။
အဲ့ဒီအခါမှာ ယဘေုယအြားဖွငျ့တော့ မှနျကောငျးမှနျနိုငျပမေယျ့ အပျေါမှာ ဆိုခဲ့တဲ့ MR, SR, OD, CR, Retard, XL စသညျတို့နဲ့ အဆုံးသတျထားတဲ့ ဆေးနာမညျတှမှော ပွဿနာရှိနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုအတိုကောကျ MR, SR တှကေိုဆေးနာမညျမှာ ဘာလို့ ထညျ့ထားရတာလဲဆိုတော့ တဈခြို့ ဆေးတှမှော သောကျသောကျပွီးခငျြး အာနိသငျပွပွီး ခကျြခငျြး အာနိသငျ ကုနျမသှားအောငျ ဆေးရဲ့ အာနိသငျ တဈနကေုနျရနအေောငျ ဖျေါစပျ ဖနျတီးထားပါတယျ။ သှေးကဆြေး ဆီးခြိုဆေး စတာတှမှောပေါ့။
MR SR စတာတှရေဲ့ အရှညျကောကျကတော့ Modified release, Slow release, substained release ပါတဲ့ ။ ဆိုလိုတာကတော့ ဆေးကို ခကျြခငျြး အာနိသငျ အကုနျမပွပဲ တနကေုနျ ဖွညျးဖွညျးခငျြး ထှကျနအေောငျ လုပျထားတာပါ။ တဈနကေုနျ အာနိသငျ ပွနအေောငျ ဒါမှမဟုတျ တရကျ ၂ ကွိမျ ၃ ကွိမျ သောကျနစေရာမလိုပဲ တဈကွိမျထဲနဲ့ အဆငျပွအေောငျ ဆေးကို စတငျ ထုတျလုပျကတညျးက တဈခြို့ဆေးတှကေို ဓာတုဗဒေပစ်စညျး ပေါငျးထညျ့ထားတာမြိုး coat လုပျထားပွီး အလှာအုပျထားတာမြိုး ဖနျတီးထားလေ့ ရှိပါတယျတဲ့။
ဆေးကိုခြိုးပွီး သောကျလိုကျတာမြိုး ၁၀၀ အား မရှိလို့ ၅၀ အား ၂ လုံး သောကျလိုကျတာမြိုးမှာ ဖွေးဖွေး စိမျ့ထှကျလာရမယျ့ အာနိသငျတှဟော အခြိုးအစား မှနျမှနျကနျကနျ မရပဲ ကမောကျကမ ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့ မိမိသောကျနကြေ ဆေးတှရေဲ့ အနောကျမှာ MR, SR, OD, Retard, XL စသဖွငျ့ပါ မပါ ကွညျ့ပီး ပါနခေဲ့ရငျ ခါတိုငျး သောကျနကြေ ပုံစံ အတိုငျးသာ သောကျပွီး တဈဝကျခွမျးသောကျတာမြိုး ၂ လုံးသောကျတာမြိုး မလုပျပဲနဲ့ ကိုယျသောကျတဲ့အား ပမာဏ အတိကကြိုသာ ရှာဝယျသောကျသငျ့ကွောငျး အကွံပွုလိုပါတယျ။
ကင်ဆာအမျိုးမျိုးနဲ့ အသည်းကျန်းမာရေးအတွက် ငွေမကုန်ဘဲ ဆေးစွမ်းထက်မြက်သော ဆီးဖြူ သီး.
ဥမ္မာဒန္ဒီ ဘာလှူခဲ့လို့ လှတာလဲ